Talaado, Febraayo 21, 2006 Khamiista, Oktoobar 23, 2014 Douglas Karr
Toddobaadkan waxaan ka qaybgalayaa sannad-sannadeedka koowaad Xerada Mashup gudaha Mountain View, CA. Qeexida mashup sida ku xusan Wikipedia waa 'degel ama codsi websaydh ah oo isku daraya waxyaabaha ka jira in ka badan hal ilo'. Aniga ahaan, tan macnaheedu waxa weeye codsi websaydh isku dhafan. Sanadkii la soo dhaafay ama sidaas, waxaan dhisay dhowr 'Mashups' ama waxaan ku lug lahaa dhowr Mashups.
Imaanshaha Xeradii ugu horreysay, in kasta oo ay ahayd, waayo-aragnimo la yaab leh. La kulanka horumariyeyaasha yar iyo weyn iyo waliba shirkadaha wada teknoolojiyada waxay ahaayeen kuwo cajiib ah. In kasta oo laygu aasay meydadka Silicon Valley, haddana waxaan runtii bilaabay inaan soo qabto cayayaanka! Web 2.0 ayaa imanaya. Waa inaad ku faraxsan tahay sababta oo ah waxay ka dhigan tahay horumarin deg deg ah, dhibaatooyin yar oo keenaya alaabada suuqa, iyo isdhexgal sahlan.
Qaar ka mid ah waxyaabaha qabow:
Dhacdo.com - tani waa aalad aan caadi ahayn oo lagu dhisay evdb (Dhacdooyinka & Goobaha Xogta) API. Qaar ka mid ah isticmaalka runti waa kuwo cajiib ah… tusaale ahaan waad soo rogi kartaa liiskaaga Lugood oo aad dib ula soo noqon kartaa jadwalka dhacdooyinka la xiriira iyaga. CAJIIB. Horumariyayaashu xitaa waxay soo saareen IM bot oo aad weydiin karto su'aalo. (Dhacdooyinka Caawa NYC? Waxayna la soo noqotaa dhammaan dhacdooyinkii ka dhacay Magaalada New York caawa).
Yahoo! iyo Google waxay u rogayaan adduunka GIS foorarin iyadoo si furan loo siidayo horumarka API qalab loogu talagalay nadiifinta cinwaanka, geokoding, iyo khariidaynta. Waxaan u shaqeeye iibiye 5 sano kahor oo boqolaal kun oo doolar kubixinayey aaladaha sidan oo kale ah oo hada laga heli karo shabakada si qof walba u isticmaalo.
flyspy.com - shirkadani waxay dhistay codsi asal ahaan dharka ka jeexaya warshadaha duulimaadka isla markaana dhigaya qorshayaashooda qiimaha jaban ee adduunka si loo arko! Miyaad hubineysaa qiimaha duulimaadka oo aad la yaabban tahay sababta aysan waligeed isu beddelin? Qalabkan ragga ayaa laga yaabaa inuu ku tuso inaad waqtigaaga lumineyso… waligeed ma beddeli karto!
WeerarkaIron.com - mashiinka lagu iibiyo websaydhka Barnaamjyada Barnaamija Codsiga.
mFoundry.com - dadkani waa sayidkii is dhexgalka mobilada. Waxay cadeeyeen nidaam aan si dhab ah u daawan karo sida codsigeyga mobile-ku-shaqeeya uu taleefanka ugu dhex socdo websaydhka!
Mozes.com - Mashup kale oo tiknoolajiyada moobiilka ah, nimankani waxay leeyihiin waxyaabo fiican. Hadda waxay leeyihiin nidaam la sii daayay oo aad farriin ugu diri karto xarfaha wicitaanka ee raadiyaha si aad u ogaato heesta ka socota raadiyaha.
Runningahead.com - iyagoo adeegsanaya Khariidadaha Google, dadkani waxay u sameeyeen is-dhexgal tababarayaasha, baaskiiladalayda, orodyahannada, iwm. Keliya maabaynta maylalka, laakiin sidoo kale muujinta isbeddelada sare ee jidka !!!
Mapbuilder.net - ninkani wuxuu ka shaqeeyaa garaashkiisa waqtigiisa firaaqada wuxuuna dhisay interface GUI ah si aad u dhisto khariidadahaaga adoo adeegsanaya Google ama Yahoo! Intaas oo keliya maahan, laakiin wuxuu horumarinayaa tiisa API taasi waa mid guud oo waxay la hadlaysaa mid ka mid ah waxyaabaha kale ee loo yaqaan 'GIS APIs'. Frickin qurux badan !!!
Microsoft, Salesforce.com, ExactTarget, Zend, PHP, MySQL, Yahoo !, Google, eBay, Amazon the dhamaan wiilasha waaweyn way wada joogeen. Waxa ugu fiican, in kastoo ... ay ahayd inay halkaas u joogeen inay caawiyaan oo ay hagaan 'macallimiinta', oo aysan ahayn inay iskaga riixaan tikniyoolajiyadooda. Ma aanan arkin wax iibin cad ah oo riixaya. Xerada oo dhami waxay ahayd runtii halkaas si ay u helaan shirkadaha iyo horumariyeyaasha inay midoobaan si ay u bilaabaan dhaqdhaqaaqa 'Mashup'.
Waa maxay toddobaad dilaaga ah! Wax badan ayaan hayaa si aan ugu soo celiyo shirkadayda maaddaama aan sii wadno ballaarinta API-ga. Sidoo kale, waxay noqon doontaa madadaalo weyn 'Mashup' codsigeena iyo kuwa kale oo badan. Ma hubo inta hurdo ee aan heli doono bisha ama labaadka soo socda!
Wixii macluumaad dheeraad ah, tag Mashupcamp.com. Sidoo kale waad iska diiwaan gelin kartaa goor hore Mashup-ka sanadka dambe! Halkaas ayaan kugu arki doonaa
Tags: dhacdoduufaangoogle +khariidadeeyemashxaradxerada mashupfoundrymuuqaalka buurahamousesorodkayaasiinyahoo